खुशीको खबर,कोरियामा हुने नेपालीहरुको भिषा थप एक बर्ष लम्व्याईने ! – Korea Pati
April 12, 2021 April 12, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on खुशीको खबर,कोरियामा हुने नेपालीहरुको भिषा थप एक बर्ष लम्व्याईने !
कोरियन सरकारले कोरियामा इपिएस अन्तर्गत आइरहेका प्रवासी श्रमीकहरुको कार्यअवधि सकिए पनि को’रोनाका कारण स्वदेश फिर्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा श्रमिकहरुको कार्यअवधि ५० दिन थप्दै आइरहेको थियो।
यो ५० दिनको म्या’दलाई अहिले बढाएर कोरियामा १ बर्षसम्म बस्न पाउने नियम गत महिना नै पारित भइसकेको छ। संसदबाट पारित उक्त का’नून लागू गरिने मिति तय गरिएको छ।
अहिले को’रोना तथा स’रुवा रो’गको म’हामा’री, प्राकृ’तिक प्र’को’पका कारण प्रवासी श्रमिकहरुको आवत जावतमा क’ठिना’इ भएमा र नयाँ कामदार कोरिया प्रवेश गर्न न’सकेमा श्रमिकहरुको कार्यअवधि १ बर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने नि’यम बनेको छ।
यो निय’म सन २०२१ को अप्रिल १३ तारिखबाट लागू हुनेछ। अप्रिल १३ दखि डिसेम्बर अन्तिमसम्म भिजा सकिने प्रवासी श्रमिकहरुको भिजा १ बर्ष थप हुनेछ।
अहिले आफूले काम गरिरहेको कम्पनी परिवर्तन गरि नयाँ कम्पनीको खोजि गरिरहनु भएका श्रमिकका हकमा पनि यो नि’यम लागू हुनेछ। अहिले ३ बर्षको कार्याअवधि सकिनेहरुलाई पनि पहिले १ बर्ष भिजा थपिनेछ र १ बर्षपछि फेरि १ बर्ष १० महिनाको भिजा थप हुनेछ।
४ बर्ष १० महिनाको कार्यावधि सकिनेहरुले भने १ बर्ष भिजा थप पाउनेछन। यदि आफूले काम गरिरहेको कम्पनीले यो थप हुने १ बर्ष कम्पनीमा न’राख्न चाहेमा पनि नयाँ कम्पनी खोजेर जान सकिनेछ। थप बिस्तृतमा एमटियुका यदय राइ सरको भिडियोबाट बुझौं।
कोरियाली सरकारद्वारा ईपीएस प्रणालीमा सुधार
काठमाण्डौ । दक्षिण कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा केही सुधार गररे कानुन पारित गरेको छ । ६ महिनापछि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार अब उस्तै प्रकृतिको कामका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाइने उल्लेख छ ।